Midowga Yurub - BBC Somali
Askartii ‘dili laheyd’ Erdogan oo la qabtay
Ciidammada gaarka ah ee Turkiga ayaa lagu soo warramayaa in ay qabteen koox ka tirsan askarta dalkaasi oo looga shakisan yahay in bilowgii afgambigii dhicisoobay ay isku dayeen inay qabsadaan Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Askartii ‘dili laheyd’ Erdogan oo la qabtay
28 Luulyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Dowladda Turkiga oo warbaahin kale xiraysa
Laba qof oo hubeysnaa oo lagu dilay Faransiiska
Booliska ku sugan waqooyiga Faransiiska waxa ay toogteen laba qof oo hubeysnaa oo dhowr qof ku qafaashay Kaniisad ku taalla magaalada Rouen.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Laba qof oo hubeysnaa oo lagu dilay Faransiiska
Suuriyaan weerar ka gaystay Jarmalka
Nin Suuriyaan ah ayaa waxa uu isku qarxiyay afaafka hore ee goob uu ka dhacayay bandhig musig koonfurta Jarmalka, ninkaasi ayaa halkaa ku dhintay waxa uuse dhaawacay 12 qof oo kale.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Suuriyaan weerar ka gaystay Jarmalka
Ilaalada madaxtooyada Turkiga oo la kala dirayo
Waxaa la kala dirayaa ciidammada ilaalada madaxtooyada waddanka Turkiga kaddib markii ku dhawaad 300 oo ka tirsaneyd xubnaha ciidammadaasi la xiray kaddib afgembigii dhicisoobay.
24 Luulyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Ilaalada madaxtooyada Turkiga oo la kala dirayo
UK oo yeelatay Ra'iisul Wasaare cusub
Theresa May waa Ra'iisul Wasaaraha cusub ee UK. Waa haweeneydii labaad ee hoggaamisa dalkan Britain.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan UK oo yeelatay Ra'iisul Wasaare cusub
David Cameron oo maanta xilka ka degaya
Ra’iisul wasaaraha Britain ayaa maanta shaqada si rasmi ah uga tagaya kadib markii lix sano uu xilkaasi hayay.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan David Cameron oo maanta xilka ka degaya
Theresa May oo arbacada xilka la wareegeysa
Theresa May oo noqoneysa ra'iisul wasaaraha cusb ee dalka Britain ayaa lagu wadaa in xilkaasi ay la wareegto Arbacada beri ah.
12 Luulyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Theresa May oo arbacada xilka la wareegeysa
Doorashada madaxtinimada Austria oo lagu celinayo
Maxkamadda ugu sareysa dalka Austria ayaa amar ku bixisay in lagu celiyo doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ee la qabtay bishii May.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Doorashada madaxtinimada Austria oo lagu celinayo
100-guuradii dagaalkii Somme oo UK iyo Faransiiska laga xusay
Munaasabado lagu xusayo 100 sano guuradii ka soo wareegatay dagaalkii Somme ayaa waxaa lagu qabtay dalalka Britain iyo Faransiiska.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan 100-guuradii dagaalkii Somme oo UK iyo Faransiiska laga xusay